Mitombo Indray ny Gazety Voarara sy ny Raharaha Khatami any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 19:02 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra Anglisy nivoaka tamin'ny Septambra 2006 ity lahatsoratra ity)
Araka ny voalazan'ny Mpanangombaovao Tsy Voafetran'ny Sisintany (RSF) sy ny Federasiôn'ny Mpanao Gazety Iraisam-pirenena, mitombo ny tsindry ataon'ny governemanta amin'ny haino amanjery Iraniana. Mihabetsaka ireo gazety sy gazetiboky nakaton'ny Kaomisiôn'ny Famelàna sy Fanaraha-maso ny Asa Fanaovangazety – sampan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny “Islamic Guidance” – tahaka ny gazety mpivoaka isan'andro, Shargh, sy ny mpivoaka isam-bolana, Nameh ary ny Hafez. Hojerentsika ireo tenin'ny bilaogera Iraniana momba ity raharaha ity:
Ho anà Ampondra ve izany rehetra izany?
Ny gazety Shargh no isan'ireo toerana farany nahafahan'ireo taranaka mpitondra fanovàna amin'izao fotoana mizara ny fomba fijeriny ny firenena, hoy i Kamangir. Mitatitra izy fa isan'ireo antony nanakatonana ity gazety ity ny famoahana sariitatra mampiseho “ampondra voahodidina hazavàna”. Voalaza anatinà tatitry ny RSF fa narahinà tamin'ny loko fotsy io ampondra io, mifono ny fanehoankevitra iray nataon'ny Filoha Mahmud Ahmadinejad (rohy maty) izay nitenenany fa nahatsapa ho voahodidina hazavàna izy rehefa niresaka tamin'ny Fivoriambe Jeneralin'ny Firenena Mikambana tamin'ny herintaona.
Milaza i Mr. Behi fa, sahala amin'ireo trano fanontàna maro hafa izay nakatona dia mety hikatona mandritra ny taona maro ny Shargh alohan'ny ampiakarana ny raharaha eny amin'ny fitsaràna. Ampiany fa:
Toa izay no antony! ary tohina ny filoha satria nilaza izy fa nisy hazavàna nanodidina ny vatany rehefa niresaka tanatin'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana izy ary nanana izany koa io ampondra io kanefa ny ampondra dia midika havendranana ao Iran! Ratsy saina! izany ve no nanakatonan-dry zareo gazety iray?!
Olana maro mihoatra ilay sariitatra
“Vaovao fohy” no lazain'i Mohammad Ali Abtahi, bilaogera no sady lefitry ny filoha teo aloha Mohammad Khatami; nakatona ny Shargh. Ny antony, tahaka ny mahazatra; fitarainana 70 avy amin'ireo manampahefana ara-dalàna sy tsy ara-dalàna izay tonga nandritra ireo andro fandraisana fanapahankevitra momba ireo raharaham-pitsaràna ary nivadika ho mpandrindra.” Manampy izy: “Manantena izahay fa hiasa indray ny Shargh saingy raha tsia kosa dia efa nahavita asa tsara ry zareo tamin'ny fampahenoana ny feony anatin'ny andro sarotra izay tsy nahenoana mihitsy ny ankamaroan'ireo feo. Hankasitraka hatrany an-dry zalahy avy ao amin'ny Shargh ny firenena Iraniana sy ny tantara. Mampalahelo, gazety tena izy io.“
Vitan'ny Shargh ny nandrakotra karazanà fironam-pôlitika maro samy hafa avy etsy sy eroa, miala amin'ny mpitazona ny fomban-drazana ka hatramin'ny vondrona hiringiriny, sns, hoy Iran Paparazi. Mino i Iran Paparazi fa noraràna mba tsy hitarafana ny hevitr'ireo mpitondra fanovàna miandalana anatin'ireo fifidianana ho avy ny Shargh (rohy maty) (fifidianana ny Antenimieran'ny Manampahaizana sy ny Filankevitry ny Tanàna) [Fa].
Tsy an'asa, tsy manam-peo
Milaza i Arousak Kooki fa mbola maro ireo olona hafa, tahaka ireo mpiasa, no anatinà toejavatra ratsy lavitra nòho ny mpanao gazety, saingy tsy misy miresaka momba azy ireo [Fa]. Manampy ilay bilaogera:
Tsy haiko izay antony nanaovan-dry zareo (manampahefana) ireo mpiasa ho tsy an'asa (50 amin'ny 50, 100 amin'ny 100, 500 amin'ny 500), tsy misy miteny na inona na inona…. Mihoatra nòho ny mpiasa vitsivitsy monja no tsy manan-ko hanina noho ny tsy mety ataon'ny pôlitika nokleary Iraniana.
Araka an'i Kourosh Ziabari, “eo amin'ny vondrona iray ahitàna mpiasa 300 avy ao amin'ity gazetiboky ity no tsy an'asa ankehitriny! Tsy haiko loatra izay ambara… Tanatin'ny sosom-piarahamonina manana saina mamiratra sy manam-pahaizana ny Shargh… Miala tsiny aho! Izany sisa no fanambaràna farany hanehoana ny ato anaty.”
Khatami sy ny sidina iray niteraka resabe
Lohahevitra iray hafa anatin'ny bilaogy Iraniana ny fitsidihan'ny filoha teo aloha, Mohammad Khatami, an'i Etazonia. Mahaliana ny mijery ny fisarahan-kevitr'ireo bilaogera momba ity tsidika tsy ofisialy ity.
Raisin'i Jomhour ho zavatra tsara ny fitsidihan'i Khatami sy ny lahateniny, ary manamarika izy fa samy hafa amin'ny an'ny governemanta ankehitriny ny fomba fiasany manoloana ireo olana tahaka an'i Iràka sy Palestina. Tononin'i Jomhour ihany koa ny fanamafisan'i Khatami fa zavamisy ny Famonoana Faobe ary tokony handray lesona avy aminy isika [Fa]. Manampy ilay bilaogera:
Toa mandray an'i Khatami sy ny heviny ho fahavalony ratsy indrindra ny mpanohitra any an-tsesitany sy ireo mpivavaka hiringiriny ao amin'ny firenena ka tsy manary izay hirika rehetra ahafahany mamely azy.
Milaza i Hoder fa nampahafantatra vondrona misy fifandraisana amin'ireo mpitahiry ny nentin-drazana amin'ny endriny vaovao ny fitsidihan'i Khatami (rohy maty). Ampiany fa mahaliana eto ny fomba nanombohan'ireto vondrona ireto nanilika ampahibemaso, vantany vao nifanaraka tamin'ny Departemantam-panjakan'i Etazonia sy notohanan'ity farany izy ireo, ny fanapahankevitra navoakan'io Departemantam-panjakana io ihany ny hanome visa an'i Khatami. Milaza i Azarmehr, izay mandray ny fitsidihan'i Khatami ho fahadisoana: “Avelao i Khatami hifanatrika amin'ireo olona nampijaliany tanatin'ny valo taona nitondràny, ndeha jerena izay fomba hiresahany amin-dry zareo.”
Nihaona tamin'i Khatami i Nasim Dasht taorian'ilay fitsidihany ary mitatitra fa noraisin'ilay filoha teo aloha ho fitsidihana lavorary indrindra iny fitsidihana nataony iny. Manakiana ny TV Iraniana ilay bilaogera noho ny tsy nandefasany ny lahateny natolotr'i Khatami tany amin'ireo Anjerimanontolo Amerikana sy tany amin'ny toerana hafa nandritra ny fitsidihany tany Etazonia (rohy maty) [Fa].